Mkpa njikọta ọnụ maka ndị na-ere ahịa na mkpọchi | Martech Zone
Nnyocha nke ndị na-ere ahịa na ndị isi oche n'oge ọkọchị chọpụtara na ọ bụ naanị pasent ise achọtaghị ihe ọ bụla dị mma maka ndụ mkpọchi - ọ bụghị otu onye kwuru na ha dara ịm ụta ihe n'oge ahụ.
Na a aghọta pent-elu ina n'ihi na ahịa ọrụ mgbe mmiri mkpọchi, ọ bụ dị ka nke ọma.
n'ihi na xPlora, ụlọ ọrụ na-ere ahịa na ụlọ ọrụ dijitalụ nke dabeere na Sofia, Bulgaria, ike ịkekọrịta faịlụ ndị a haziri na ihe ndị ọzọ a na-ahụ anya na ndị ọrụ na atụmanya egosiwo dị oke mkpa.
Bụ ụlọ ọrụ dijitalụ, nchekwa, yana 24/7 ịnweta ihe anya bụ isi maka otu anyị. pCloud zuru oke na nchekwa nchekwa nke anyị mejuputara iji mezuo ihe ndị ahịa anyị na mpaghara anyị chọrọ.
Georgi Malchev, xPlora Onye Mmekọ
Otu xPlora jiri ugbu a pCloud, otu n'ime igwe ojii na-eto eto na igwe na-ekesa faịlụ. Na ndị ahịa ụwa, mkpọchi nyere otu ihe ịma aka.
Mana olee otu ndị otu ịzụ ahịa ga - esi kesaa faịlụ dị mkpa - na mgbe nnukwu - iji rụọ ọrụ na oke ike na ụwa ebe Covid-19 na-aga n'ihu na-ebibi mbibi? Enwere iwu ọla edo atọ iji jigide azụmahịa na-aga n'ihu mgbe ị na-arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ na ngwakọ:
Nọgide na -ejikọta ma na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ọrụ ibe gị n'ụlọ nwere ike bụrụ ihe siri ike, na ihe dị mfe dịka igosi ibe gị akwụkwọ ọrụ, ghọrọ ọrụ siri ike karị. Ikike ịrụ ọrụ ọnụ na dọkụmentị, visuals na faịlụ ọdịyo dị ka ọfụma dịka ị ga-esi rụọ n'ime ọfịs bụ isi ihe ga-eme ka ịga nke ọma.
Around 60% nke ndị Britain na-arụ ọrụ n'ụlọ ebe ọ bụ na mkpọchi coronavirus, na 26% na-ekpebi ịga n'ihu na-arụ ọrụ site na ụlọ mgbe ụfọdụ, otu oge ka ọ dị mma ịme ya. Ọbụna mgbe iwu zuru oke weghachite, a ka ga-enwe mkpa ijikọ ndị ọrụ ibe gị na-anọghị n'ọfịs mgbe niile ma kpebie na ha ga-arụ ọrụ site n'ụlọ. Ọ ghọọla ihe dị mkpa ịnwe ngwaọrụ mmekọrịta dị mma nke onye ọ bụla nwere.
Gbado anya na nchekwa faịlụ
Ọ dị mkpa n'oge a na-ejighị n'aka na onye ọ bụla nwere mmetụta nke nchekwa mgbe ọ na-emekọrịta na akwụkwọ. Nke a gụnyere inye ndị ahịa mmesi obi ike yana ndị ọrụ. Naanị nchebe ndị agha na-enye ezi udo nke uche na mmesi obi ike, yabụ ọ dị mkpa na ndị nwe azụmaahịa na ndị nọ na teknụzụ ọhụụ na-arụ ọrụ ụlọ ha. Na pCloud, anyị chọrọ ịga n'ihu n'ihu ma hapụ ndị ọrụ ka ha kpebie ma ha ga-achọ ịchekwa ozi ha n'ime Europe ma ọ bụ United States, na-enye ha ohere ịkwaa ebe ebe echekwara faịlụ ha dabere na mmasị onwe ha.
Mfe nke iji bụ ikekwe nnukwu ọchịchọ maka ndị na-eweta nchekwa igwe ojii. Businesseszụ ahịa ndị a achọghị bụ usoro na usoro ihe mgbagwoju anya ọzọ iji mụta. Ihe ngwọta nke kwesịrị ekwesị maka nkà niile dị oke mkpa.
E buru amụma na site na njedebe nke 2020, 83% nke oke ọrụ ga-adị n'igwe ojii, na-egosiputa mkpa ọ dị ijikọ mgbe ị na-ekekọrịta echiche na ịmepe usoro ịzụ ahịa, yana ịmepụta gburugburu ọrụ ọrụ mmekọrịta. Maka ụlọ ọrụ ịzụ ahịa, Covid-19 enyela ohere ịnweta usoro ziri ezi na usoro iji zute 'ọdịnihu nke ọrụ'. O bu ohere ha agaghi echefu.
Banye maka pCloud
Tags: ịkekọrịta faịlụahia mmekoritapcloudimekọ ihe ọnụọrụ dịpụrụ adịpụọrụ dịpụrụ adịpụ